मै हुँ भन्नेलाई पनि यी काम गर्न गार्है पर्छ, नपत्याए कोशिश गरेर त हेनुस् ! – MEDIA DARPAN
मै हुँ भन्नेलाई पनि यी काम गर्न गार्है पर्छ, नपत्याए कोशिश गरेर त हेनुस् !
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ११ आश्विन २०७७, आईतवार १८:१३
हरेक कार्य गर्ने क्षमता हुनेहो भने मानवलाई महामानव भनिन्थ्यो होला। हरेक व्यक्तिको फरक-फरक क्षमता हुने गर्छ। तर हामी यस लेखामा प्रायले गर्न नसक्ने कार्यको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। एक पटक तपाई पनि गर्ने प्रयास गर्नु होला। निम्न उल्लेखित कार्य साधारणतया गर्न लगभग असम्भवनै मान्न सकिन्छ।
आफ्नो जिब्रोले हातको कुहिना छुन
तपाईलाई आफ्नो जिब्रोले हातको कुहिना छुन के गार्हो होला भनेर लाग्न सक्छ। तर यस कार्य सम्भव छ कि छैन प्रयास पछि मात्र थाहा हुन्छ। धेरै व्यक्तिलाई यो सजिलो काम त सकिन्छ लाग्न सक्छ तर यस कार्य लगभग असम्भवनै रहेको छ। एक पटक प्रयास गरेर हेर्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ।
आँखा झिमिक्क नगरी हाछिउ गर्न
असोज ११, २०७७ST
पहिलो पटक सुन्नेलाई आँखा झिमिक्क नगरी हाछिउ गर्न सकिन्छ लाग्न सक्छ भने यस कार्य सामान्य पनि लाग्न सक्छ। तर कुनै पनि व्यक्ति अहिले सम्म आँखा झिमिक्क नगरी हाछिउ गर्ने क्षमता भएको व्यक्ति भेटिएको छैन। एक पटक तपाई पनि प्रयास गर्नु होला।
यस कार्यको लागि सबै भन्दा पहिला आफ्नो दाहिने खुट्टा जमिनबाट केहि माथि उठाउनुस् अनि त्यसलाई घडीको दिशा घुमाउनुहोस् । त्यस लगतै अर्को खुट्टा उठाउनुहोस् अनि त्यसलाई घडीको दिशाको विपरित दिशामा घुमाउन कोसिस गर्नु होस्। यदि तपाई यस कार्य गर्न सफल हुनु भएमा महामानव कहलाउनु हुनेछ।
जिब्रोले नाग छुने कार्य
यस्तो कार्य गर्नको लागि साधारणतया असम्भव हुने गर्छ। साधारण व्यक्तिको यति लामो जिब्रो हुँदैन की जसले गर्दा नाक छुन सकियोस्। यस कार्य धेरैको लागि असम्भव हुने गर्छ। तर विश्वमा यस कार्य गर्न सकेन धेरै व्यक्तिहरु रहेका छन्।
हातको औंलाको ट्रीक
यस कार्यको सबै भन्दा पहिला आफ्नो हात एक टेबलमा राख्नुस्। बीचको औंला आफ्नो हत्केला पट्टि मोड्नु होस्। त्यस पश्चात बुडी औला, कान्छी औंला, र तर्जनी औंला उठाउनुहोस्। त्यस पश्चात बाँकि रहन्छ औंठी लगाउने औंला। त्यस औंलालाई पनि अन्य औंला जस्तै उठाउन कोहि पनि सक्दैन। विश्वास लागेन भने वक पटक आफै प्रयास गरेर हेर्नुहोला।
अल्छिले जति जैसिले पनि जान्दैन भन्थे हो रहेछ : हेर्नुहोस् अल्छिहरुले निकालेको केहि जुक्ति !